🥇क्यामफ्लाज टेकनीकमा सबैभन्दा विशेषज्ञ जनावरहरू (क्रिपिसिस)
जनावरहरूको संसारमा, केहिलाई उनीहरूको खतरा थाहा छ र अरूबाट लुक्नु आवश्यक छैन। यद्यपि, तिनीहरू मध्ये कतिपयलाई उनीहरूको कमजोरी थाहा छ, उनीहरूले धोका दिने र क्यामफ्लाज प्रविधिहरू छनौट गर्दछन् ताकि उनीहरूका शिकारीहरूले तिनीहरूलाई देख्न सक्दैनन्। यो घटना भनिन्छ crypsis, र यहाँ हामी सबै भन्दा विशेषज्ञहरु सङ्कलन। यति धेरै कि तपाईंलाई फोटोमा देख्न तपाईंलाई गाह्रो हुन सक्छ।
Euthalia मोनिना कमला - मलेशिया
तपाईं उसलाई देख्न सक्नुहुन्छ कि हेरौं। हामी तपाइँलाई आश्वस्त गर्दछौं कि त्यो हो।
मिमेटिक पशु बराबर उत्कृष्टता। सबै भन्दा राम्रो परिचित छलावरण विशेषज्ञ ।
उत्तरी लीफेटेल गेको - अष्ट्रेलिया
मानौं यो एक अर्को सुक्खा पात हो।
यो टहनी जस्तो देखिन्छ, तर यो छैन ...
यो रूखको छाल होइन ... यो उल्लू हो!
यो मलाई धोका दिन्छ। म फ्लोरिस्ट प्रवेश गर्न सक्षम छु यो एक अर्किड हो भनेर विश्वास गर्दै।
नक्कल अक्टोपस - इन्डोनेशिया
यो जीवाश्म जस्तो देखिन्छ, र यो अक्टोपस हो ...
हिप्पोकैम्पस वालिया पिग्मी - इन्डोनेशिया
कोरलको नक्कल गर्ने सिहर्स।
हिमचितुवा वा ईबिस - मध्य एशिया
यसको मूल्य तिर्नु पर्दैन। तर यो छ।
Uroplatus geckos - मेडागास्कर
मानौं यो रूखको बम्प हो।
एउटा पुतली एडेलफा सर्पाको क्याटरपिलर - मेक्सिकोदेखि ब्राजिल
जो कोहीले यसलाई अलिकति काईको साथ भ्रमित गर्न सक्दछ।
झाडीहरु वा Tettigoniidae को क्रिकेट
यो आवरण लुकाउनु अर्को मास्टर छ।
ट्याड भनेको के हो र पात भनेको के हो?
लागोपस लागगो - उत्तरी अमेरिका र यूरेशिया
सबै यति सेतो ... मिश्रण गर्नका लागि सही।
र सोच्न कि बालुवामा एक माछा भ्रमित छ ...
यी क्यामफ्लाज प्रविधिहरूमा सबै भन्दा कुशल जानवरहरू हुन्। तपाईंले पहिचान गर्नुपर्दछ कि तिनीहरूसँग एउटा उपहार छ जुन कुनै पनि समय हामी सबैलाई मिल्छ, सही? यो घर वा जुत्ता स्टोरको साथ अलमलमा पर्नु राम्रो हुन्छ जब तपाईलाई त्यस्तो अभिवादन छैन जस्तो कि छिमेकी वा छिमेकीलाई यति भारी ...
स्पेनमा पवित्र हप्ताको सबैभन्दा उत्सव परम्पराहरू